Maung Khin Aung Tint (Ma Dauk) - NLD & its principles
(၃) အရေးပေါ်အခြေအနေကာလမှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တိုင်းပြည်ကို အများဆုံး(၂)နှစ်အထိ အုပ်ချုပ်နိုင်သလို ထိုကာလကျော်လွန်တဲ့အခါမှာ လည်း အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၂၁၊ ၄၂၇၊ ၄၃၁တို့အရ အာဏာ(၃)ရပ်စလုံးကို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီက သမ္မတကိုယ်စား ကျင့်သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
X ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်၊ အဖွဲ့ချုပ်၏ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ကို ကိုင်စွဲထားရမည် -
X တရားမျှတမှုမရှိ၊ တဖက်သတ်ရေးဆွဲထားသည့် ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါ၊ ဥပဒေပါ စည်းကမ်းချက်များမှာ ဒီမိုကရေစီ နည်း မကျ။
X အဖွဲ့ချုပ်သည် ကျမ၏ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်၊ မည်သူတဦးတယောက် ၏ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလည်း မဟုတ် -
X အဖွဲ့ချုပ် ဖျက်သိမ်းခံရလျှင် အဖွဲ့ချုပ် ပျက်စီးသည်ဟု မယူဆ၊ ပျက်စီးခြင်းမဟုတ် -
Maung Khin Aye Tint (Ma Dauk) Op-Ed
now, we want " the way to democracy ", we dont want " bloody field ", please try to write " how to set up our Nation without Bloody and peace full approach". we want " future plan and seed for Democracy". Democracy is just the way of approach to get power in the people's hand.Even USA's democracy history is about 200 years over , who can say USA get perfect democracy, they are walking on this way with corrections, revision, changes. So, we are at very first step compare to USA. Please try to find solutions and choose the best or support who try to set up this road.